Date: May 30, 2016Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, Caamsaa 30, 2016) Qorumsi Barnoota Olaanoo ittiin seenan haqamuu isaa Ministeerri Barnootaa ibse.
Har’aa jalqabee hanga Kamisaatti kennamuuf kan ture qorumsi kutaa 12ffaa kun kan haqame qorumsi Afaan Ingiliffaa Koodii 12 ba’uusaan waan mirkanaa’eef akka ta’e miniteerichi beeksiseera.
Ministeerri Barnootaa ragaa kana akkuma nama isa kaanii intarneetii irraa argachuusaa kan ibse Ministirri barnootaa Obbo Shifarraaw Shigguxee, qormaatichi ba’uunsaa sirrii ta’uu mirkaneessuuf haga har’a ganama qormaatichi banamutti eeguun dirqama akka tures addeessera.
Akak kanaan har’a ganama yeroo qormaata isa mana-maxxansaa Birihaanii fi Salaam jiru waliin ilaalanii dhugaa taúun mirkanaa’etti tarkaanfiin kun fudhatamuu isaa Ob Shifarraaw addeesseera.
Qorumsoonni kaan ba’uu dhiisuusaaniif ammoo mirkaneeffaan waan hin-jirreef qorumsoonni hundi akka addaan citee haqamu godhamuu isaanii ministeerichi eereera.
Guutummaa biyyattiitti buufataaleen qormaataa 800 jiru. Akka ministeerichi ibsetti, qormaati kun buufata kam keessaa akka bahe fuulduratti ni qoratama.
Qormaatni wayita qophaa’u karoorri jalqabaa fi of eeggannaa jechuunis ‘Karoorri A’ fi ‘Karoorri B’ akka jiru kan kaasan ministirichi, inni jalqabaa waan addaan citeef karoorri of eeggannoo jechuunis ‘Karoorri B’ akka hojiitti hiikamu beeksisaniiru.
Yeroo gabaabaa keessatti dhiheessiin Lojistiksii akka guutameen qorumsichi akka kennamu ministirichi eereera.
Barattoota qorumsicha qoraman hundumaa fi maatii isaanii dhiifama kan gaafate ministeerichi barattoonni qoo’annaa isaaniitti akka deebi’an hubachiiseera.
Kana dura qormaatni kutaa 10 ba’eera kan jedhame garuu dhara ta’uusaa ministeerichi Obbo Shifarraaw mirkaneessaniiru.
Previous Previous post: የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና መቋረጡን የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።
Next Next post: Miseensota OPDO Lama Hidhaman